Football Khabar » यी प्रशिक्षक जसले बार्सिलोनामा भाल्भर्डेको स्थान लिँदैछन् !
यी प्रशिक्षक जसले बार्सिलोनामा भाल्भर्डेको स्थान लिँदैछन् !
एजेन्सी, जेठ १३
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे फुटबलबाट आउट भएपछि बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेमाथि दबाब छ । दुई ठूला उपाधि गुमाएपछि उनलाई क्लबले नै बर्खास्त गर्ने अनुमान गरिए पनि क्लबले भाल्भर्डेलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ ।
तर, यतिबेला भाल्भर्डे स्वयंमाथि भने चर्को दबाब छ । उनको आलोचना बढेको छ । र, उनलाई बार्सिलोनाका फ्यानले अर्को सिजन पुनः बेन्चमा देख्न चाहेका छैनन् । विश्वभरिका फ्यानहरूको ठूलो हिस्साले ‘भाल्भर्डे आउट’ भन्दै सामाजिक सन्जालमा अभियान नै चलाइरहेका छन् ।
स्पेनिस मिडियाले भने भाल्भर्डे क्लब छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् । ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’ले यसै सातासम्ममा भाल्भर्डे क्लब छाड्ने घोषणा गर्न सक्नेछन् ।
यता, बार्सिलोनाले भने आफ्ना प्रशिक्षकले क्लब छाडेको खण्डमा नयाँ प्रशिक्षकको पहिचान गरेको छ । क्लबले भाल्भर्डेलाई आफूले बर्खास्त नगर्ने तर उनले जतिसुकै बेला पनि क्लब छाड्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आफ्ना भावी प्रशिक्षक बन्न सक्नेहरूको नाम तयार पारेको छ ।
जसमा नेदरल्यान्ड्सको राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोएमान बार्सिलोनाले भित्र्याउन चाहेका पहिलो नम्बरका प्रशिक्षक हुन् । सन् २०१८ बाट डच टिम सम्हालिरहेका ५६ वर्षीय कोएमानलाई बार्सिलोनाले भावी प्रशिक्षकका रूपमा हेरिएको छ । ।
नेदरल्यान्ड्सको राष्ट्रिय टिमका पूर्वखेलाडीसमेत रहेका कोएमानको खेलाउने शैली बार्सिलानोसँग मिल्ने भएकाले बार्सिलोनाले उनलाई भित्र्याउने सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि पहिला भाल्भर्डेले बार्सिलोनामा कोठा खाली गर्नुपर्छ ।
भाल्डर्भेले बार्सिलोनामा दोस्रो सिजन बिताउँदा दुई ला लिगा र एक कोपा डेल रे जित्दा दुवै सिजन च्याम्पियन्स लिग गुमायो । बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेको चार वर्ष भइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति १३ जेष्ठ २०७६, सोमबार १३:५७